Iingcebiso ezili-11 zokwenza uyilo olulungeleleneyo (uyilo oluphendulayo) | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo oluguqukayo (uyilo oluphendulayo)
Lua louro | | Uyilo lwewebhu, Amaqhinga
Abasebenzisi abafikelela kwi-Intanethi ngeetafile kunye neefowuni eziphathwayo bayanda. Oku, njengoko sele uyazi, kuthetha ukuba akwanele ukuyila iphepha elilungileyo lewebhu elibonakala lilungile kwikhompyuter yethu: kufuneka ibonwe nakwiselfowuni nganye. Ingxaki? Ubungakanani besikrini kunye nezigqibo. Kungenxa yoko le nto kunzima ukwenza uyilo oluguqula ngokuchanekileyo kuyo yonke imithombo yeendaba (eyaziwayo design ezwayo, iguqulelwe njenge uyilo oluguqukayo).
Nazi ezinye iingcebiso zokugcina engqondweni xa usenza uyilo olunale mpawu. Qwalasela!
Iingcebiso zoyilo oluguqukayo
Yenza itemplate elulaNgokulula andithethi bland. Ndithetha nge isakhiwo I-HTML yewebhusayithi yakho: icace gca, ingcono. Gcina ukhumbula ukuba isikrini sekhompyuter sinokulingana neekholamu ezintathu ezime nkqo; Kwisikrini seselfowuni, uya kulungela enye kuphela. Cinga ngayo kwaye uza kuyibeka njani kwakhona imeko.
Susa yonke into engeyomfunekoThintela iziphumo zejQuery, oopopayi beFlash kunye nayiphi na enye ikhowudi ecothisa ukulayishwa kwephepha lakho. Umxholo omncinci wolu hlobo unayo, ngokukhawuleza iwebhu iya kulayisha.
Chaza isitayile css nganye "kubungakanani"Yenza i-tiny.css, encinci.css, kunye enkulu.css (umzekelo) eqhuba ngokusekwe kwisixhobo esijongwa kuso. Umzekelo:
@import url (tiny.css) (min-width: 300px);
@import url (encinci.css) (min-ububanzi: 600px);
@import url (enkulu.css) (min-ububanzi: 900px);
Ezona zisombululo zisetyenzisiweyo320px / 480px / 720px / 768px / 900px / 1024px
Yenza itemplate yakho ibonakaleNanini na apho unako, sebenza ngeepesenti endaweni yexabiso elimiselweyo. Nazi ezinye izinto ezilinganayo: 200px = 15'38% / 300px = 23'07% / 800px = 61'5384615384%
Uhlobo lokuchwetheza Kubaluleke ngakumbi kunangaphambili Ngamanye amaxesha isikrini sakho sefowuni sinokuba sincinci kangangokuba yonke into oyibonayo isicatshulwa. Kungenxa yoko le nto kufuneka sikhethe ngononophelo olona hlobo lwamagama alungileyo kwindawo yethu, ukuze xa bencitshisiwe ngobungakanani bangalahli ubume. Ukongeza, kuya kufuneka siyazi indlela yokudibanisa iifonti ezingathathi hlangothi kunye nabanye ezinobuntu obunika iwebhu uphawu oluyimfuneko. Ke ngoko, ingcebiso yokuqala kukuba uchitha ixesha ukhetha iifonti oza kuzisebenzisa.
I-USA imifanekiso ekumgangatho ophezuluNjengoko isithuba sincitshisiwe, imifanekiso iya kuhamba nayo. Khetha ezo zingalahlekiyo kumgangatho xa zincitshisiwe, kwaye zisebenza ngokufanayo xa zilinganisiwe. Umfanekiso ongekho mgangathweni uya kwenza ukuba iwebhusayithi yakho ibonakale imbi.
Ukuba imifanekiso yakho ihlala ibonwa igcweleThintela iifoto zakho ekunqunyulweni ngokongeza img (ububanzi: 100%;) ikhowudi kwi-css yakho. Ngale ndlela, uxelela isixhobo ukuba siphinde silinganise ukuphakama okunikezelwe kumfanekiso ukuze ububanzi bawo bubonwe ngekhulu leepesenti.
Zonke ziphantsi i-URL efanayoLibala malunga nemimandla engezantsi efana ne-www.mysite.com/mobile, kuba ifayile efanayo ye- index.html kwifolda yengcambu iya kusebenza kuzo zonke izixhobo (ukuba wenza uyilo ngokuchanekileyo). Sele uyazi inzuzo: iidomain ezincinci ezimbalwa, ngokukhawuleza umthwalo wephepha uya kuba.
Thatha ithuba lokuxhasaYiba nentelekelelo yokucinga ayifani ukufikelela kwiwebhusayithi esuka kwikhompyuter ye-desktop kunakwifowuni ye-iPad okanye yeselfowuni. Ngeyokuqala, uya kuhamba ngendlela ezolileyo nekhululekileyo. Ngale yokugqibela, uya kuyenza ngeeyure zokungasebenzi kwaye uvale ifestile nje ukuba udikwe. Thatha ithuba lale miqathango ukonwabisa umsebenzisi kwaye ubenze bonwabe kuloo mizuzu imbalwa baya kuyinikezela kuwe. Mhlawumbi xa efika ekhaya uya kuthatha isigqibo sokundwendwela kwakhona ngendlela ekhululekile ngakumbi.
Fumana amandla Kwiimpapasho zedijithali, uya kuzibuza ukuba kutheni le ngcebiso. Kulula kakhulu: iimagazini zedijithali (kulungile) bayayazi indlela yokusebenzisa ithuba lenkxaso kwaye uyilo lwabo lukrelekrele kakhulu. Khuthazwa ngabo kwaye wenze iwebhusayithi ekunzima ukuyishiya.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iimagazini zedijithali
Imvelaphi Splio, 960.gs, kwikholamu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyilo oluguqukayo (uyilo oluphendulayo)
UDídac Rios sitsho
Kukho izinto endingavumelani nazo kakhulu.
Kwinqanaba 5 ... ukusukela ngo-200px = 15,38% kunye nala alandelayo ... olu thelekiso lwesalathiso alunakwenziwa ngaphandle komlinganiso wabazali, ubungakanani ngeepekseli ayisiyonto yokulinganisa njengepesenti!
Chaza imifanekiso enobubanzi: 100% ayilunganga, andiqondi ukuba kufanele ukuba sisindululo. Imifanekiso iyichaza ngcono ngobubanzi nokuphakama kwayo, ke iserver ithatha ixesha elincinci ukwenza ulwazi (akufuneki ibalwe ubungakanani bayo) kwaye siphucula isantya sokulayisha kwephepha (into ebaluleke kakhulu kuyilo lwewebhu oluguqukayo okanye oluphendulayo. ).
Bendiya kubandakanya, nangona kungumsebenzi wempumlo ... imifanekiso yezikrini ze-retina. Ukuba sifuna ukwenza uyilo lwewebhu oluphendulayo, kunyanzelekile ukuba sisebenzise imifanekiso yokubonisa i-retina, kuba iipesenti eziphezulu zeselfowuni kunye neethebhulethi zisebenzisa ezi zikrini. Ke akukho sizathu sokubeka iinzame kuyilo lwabo kwisiqingatha sempucuko.
Phendula kuDídac Rios
Kwinqaku lesi-5, zikubeka kumxholo kwaye zikuxelele ngobume obupheleleyo be-1300px eneekholamu ezi-3, enye yazo ingama-200, 300 no-1000.
Ukuba uyigqithisela kwiipesenti, kwimeko yabo zinje ngokutsho kwakho, i-15,38% ((200 * 100) / 1300) (idesimali engezantsi, inkqubo yamanye amazwe: P)
Kodwa ukuba sithetha ngobume be-500px kwaye sineekholamu ezi-3, enye ingama-200, enye ingu-200 enye ye-100px, iipesenti azisafani, kule meko 200px = 40% ((200 * 100) / 500)
Baya kuba: 200px = 40% kunye 100px = 10%
Yiza, njengoko bendiphawula ukuba ayisiyo ireferensi oyibonisayo, zizalathiso kuphela kulwakhiwo lwe-1300px.
Hayi ukusilela, ulungile emhlabeni! Enkosi kwakhona ;)
INintendo 2DS, ikhonsoli entsha yezoqoqosho yeNintendo
Iselfowuni, ukuvavanya indawo yakho kwizixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni